Lafarge Zimbabwe appoints Precious Murena-Nyika as chief executive officer - Cement industry news from Global Cement
News Lafarge Zimbabwe appoints Precious Murena-Nyika as chief executive officer
Lafarge Zimbabwe appoints Precious Murena-Nyika as chief executive officer
Zimbabwe: Lafarge Zimbabwe has appointed Precious Murena-Nyika as its chief executive officer (CEO). She succeeds Siame Kaulule, who left the post in February 2020 for a new role with LafargeHolcim in South Africa, according to the News Day newspaper.
Murena-Nyika was previously director for human resources and communications at Lafarge Cement Zimbabwe. She is the immediate past president for the Institute of People Management of Zimbabwe. She holds a degree in Psychology and Masters in Business Administration from the University of Zimbabwe and a postgraduate diploma in leadership from the Harvard Business School.